Mayelana NATHI - Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Umugqa Wokukhiqiza Amakhadibhodi Okhiqiziwe
Umshini wokunyathelisa weFlexo
I-Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. Itholakala eningizimu yenhlokodolobha iBeijing, enyakatho neJinan, enezinto zokuhambisa amanzi nezomhlaba ezilula. Kungumsebenzi wobuchwepheshe okhiqiza imishini yamakhathoni nemishini yokuphrinta yesilinganiso esikhulu. Le nkampani inemishini ephelele, ubuchwepheshe obukhulukazi, ulwazi oluningi lokukhiqiza, amandla aqinile wezobuchwepheshe, izindlela zokuhlola ezithuthukile, uhlelo oluphelele lokuphatha, futhi isidlulile i-ISO9001: 2000 isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba jikelele (inombolo yokubhalisa: 03605Q10355ROS) Kuyinkanyezi ekhulayo embonini yaseChina yokunyathelisa imishini imboni.
Imikhiqizo yenkampani yethu inamamodeli amaningi wokuchazwa nokucaciswa, okungahlangabezana nezidingo zabasebenzisi abahlukile. Ngomoya "wokwenza kahle" futhi "okukhethekile", inkampani yethu ikhuthaza ngenkuthalo ukuphathwa kwekhwalithi ephelele. Imikhiqizo ekhiqizwayo inconywa kakhulu ngabasebenzisi emhlabeni wonke ngokubukeka kwabo okuhle, ubuciko obuhle futhi obucokeme, intengo efanelekile kanye nensizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva.
Le nkampani ineminyaka engaphezu kwengu-30 ye-R & D nesipiliyoni sokukhiqiza, inkampani ibilokhu inamathela kumqondo wenkonzo "wokuqinisekisa ikhwalithi, okhonze insizakalo, ogxile kumakhasimende", nobuchwepheshe obuphambili, ulwazi lobuchwepheshe kanye nokuphathwa kwe-R & D kwekhompyutha nokukhiqizwa okokukhiqiza ibhodi imishini yokukhiqiza. Ngokususelwa esikhathini samanje, sibheke esikhathini esizayo, lapho kunentuthuko yamanje yemishini yamakhathoni, sizobambisana ngentshiseko egcwele, siqinise ukuphathwa kwangaphakathi, sandise imakethe, sandise ucwaningo lwesayensi, sithuthukise izinhlobo ezintsha zomkhiqizo, futhi sithuthukise okukhona imikhiqizo. Izinkomba zokusebenza, futhi ulwela ukufeza ikhwalithi ephezulu nemikhiqizo yamanani aphansi kanye nensizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva ukuze ukwenze ube nesiqiniseko se-100, ukwaneliseka okuyinkulungwane, ukufezekisa ngempela ukunqoba kwethu!